China FOTON C8L EV fekitori uye vagadziri | Foton
Yakagadzirirwa maguta madiki nepakati nepakati, inosangana nezvido zvakasiyana zvekufambisa senge mataundi ebazi reguta uye kutakura kwemukati. Inovandudza uye yakasarudzika European dhizaini, yakanaka uye nyowani, inotungamira yeruzhinji yekufambisa fashoni maitiro.
Kunopindirana Dimension 8540 * 2450 * 3000/3100
Kurambidza Kurema 9.15T
Passenger / Seating Kugona 56-67 / 12-31
Chimiro chemuviri Monocoque, Yakadzika-yekupinda / Mbiri-nhanho
Iko kusanganiswa kwekuchinjika, kurerukirwa kwekuwana uye yemukati spatial sangano, ine zero kubuda, tsanangura iyo DNA yebhazi idzva iri. Foton C8L EV bhazi reguta rinosangana nemhando dzakasiyana dzezvifambiso zvinodikanwa zvemataundi eguta mitsara uye yekufambisa kwemukati.
Iko kusanganiswa kwekuchinjika, kurerukirwa kwekuwana uye yemukati spatial sangano, ine zero kubuda, tsanangura iyo DNA yebhazi idzva iri. Foton C8L EV bhazi reguta rinosangana nemhando dzakasiyana dzezvifambiso zvinodikanwa zvemataundi eguta mitsara uye yekufambisa kwemukati. Kujekesa iyo minimalist yekushongedza dhizaina pasina chishongo chakawanda, inogadzira kuzivikanwa uye chifananidzo icho chinozivikanwa nyore nevashandisi.
zvachose magineti synchronous mota
Yakashongedzerwa neepamberi yakazvimirira mota yekudzora system, iine makore ekushandira mashandiro, mwero wekupinda wakakwira.
Yakabatana simba chimiro dhizaini
iine oparesheni mileage yemakiromita 80-120 iine mutoro uzere, uye ingori 2-3 nguva yekuchaja pazuva pamwe neanosvika makore gumi nemasere hupenyu hwebheteri.
kusangana nemhando dzakasiyana dzekutakura dzinodikanwa nemitsetse yebazi reguta uye kutakurwa kwemashure.
Kupisa-kudzora kutonhora system
Kuziva njere yekumhanyisa mirawu inoenderana nezvinodiwa nemwaranzi kuti uwane kugona kukuru uye kuchengetedza simba.
Yakakwira-simba simbi yesimbi inoiswa ine yakakwira goho simba yakawedzera ne50% pane iya yakajairwa simbi. Iine yakanaka yakaderera tembiricha yemamiriro ekunze kusagadzikana uye yakasimba dhizaini, inovimbisa kutyaira chengetedzo.
Truss-mhando monocoque muviri dhizaini uye yakavharika-chiuno dhizaini, ine torsional simba yakagadziridzwa ne50%, inopa mutyairi nevatakuri neakasununguka uye akachengeteka kutyaira uye kukwira ruzivo.
Nyika-ye-iyo-hunyanzvi electrocoating matekiniki anovandudza zvakanyanya anti-ngura mashandiro uye runogara-rurefu rwemabhazi.
GPS inosanganisirwa nevhidhiyo yekutarisa terminal inovimbisa manejimendi vashandi vanogona kuongorora nzvimbo yemotokari uye mamiriro emabhazi emukati uye pakarepo vanosangana nezvinetso, senge mota yakamhanyisa kana kukakavara kwemutyairi nezwi intercom
Iyo sisitimu inoratidzira huerarchical dhizaini yekuparadzira dhizaini uye yepakati manejimendi, ichiona kugovana kweruzivo pakati pechiteshi nemotokari, nekusimudzira kuwanikwa kwezviripo zviripo
Pa-bhodhi manejimendi sisitimu -Tink, ine akangwara kuchengetedza kwezvakatipota zvigadzirwa, akangwara mashandiro ekutsigira uye humanized sevhisi, kugadzira yakasanganiswa manejimendi chikuva chevanhu, mota nemigwagwa.